Ihe mkpuchi mkpuchi smart key dị na New Ford
Nkọwa:Ekpuchi Nchedo Silicone nke Ford Focus,Ford Smart Key Case,Isi mkpuchi isi mkpuchi
Home > Ngwaahịa > Epeepe mkpuchi Silicone Car > Ihe mkpuchi mkpuchi smart key dị na New Ford
Ihe Nlereanya.: Ford02
Anyị mara mma ụwa co, Ltd nwere ụlọ ọrụ anyị ma na-elekwasị anya ịmepụta mkpuchi mkpuchi ụgbọala maka afọ asaa. Ugbu a, mkpụrụ okwu ịkwọ ụgbọala nke mkpụrụ ndụ silicone anyị na-emepụta bụ ihe mara mma, dị mma. mkpuchi mkpuchi silica na-ekiri mkpuchi bụ otu n'ime ire kachasị mma nke Ford S ilicone Cover Cover n'ihi na ọ na-emetụ aka, na-enweghị isi, na-enwe mmekọrịta enyi na enyi. smart smart ikpe dị kwa mkpa buru ibu ebe ọ bụ na ọ dị elu na mba Europe. Anyị nwere obi ike na ị ga-enwe afọ ojuju maka okwu mkpuchi isi anyị.
Nke ọ bụla n'ime ihe mkpuchi mkpuchi nke ọ bụla nwere atụmatụ ndị a:
2. Isi okwu dị na mkpụrụedemede dị na silicone zuru oke maka igodo ụgbọala Ford gị .
6. Onye na- ejide onwe ya na Silicone nwere àgwà ndị na-adịghị emerụ ahụ, gburugburu ebe obibi enyi na enyi, okpomọkụ na-eguzogide, ihe siri ike, mmiri na-adịghị ahụkebe, ihe nkwụ.
Ogwe mkpịsị ugodi ala ụgbọala Silicone adịghị emerụ ahụ ma ọ bụrụ na ị na-eme enyi na gburugburu ebe obibi. Mgbe ị na-ejide ụda ụgbọala ụgbọala Ford maka n'aka gị, ọ na-adị nro, dị mma na ìhè. Ị ga -ahụ bọtịnụ ụgbọ ala 3 bọtịnụ 3 mgbe ị nwere ya.
Ihe niile anyị na-eji ngwaahịa mkpuchi ụgbọ ala silicone ma ọ bụ mkpuchi uhie uhie ígwè nwere SGS na FDA certifications.
Dị ka ị nwere ike ịhụ na foto dị n'elu, anyị nwere ike ịnye agba ọ bụla ị chọrọ. Agba ọ bụla nwere ike ịbụ omenala.
Akara DeDossed 2D Car Key shell nwere ike ibu site na-eme ihe ike
Ọkpụkpọ isi maka igodo ụgbọ ala mgbe ọkụ na-acha ọcha
Ekpuchi Nchedo Silicone nke Ford Focus Ford Smart Key Case Isi mkpuchi isi mkpuchi Ekpuchi Egwuregwu Silicone nke Ford Mondeo Ekpuchi Silicone nke dị elu Ekpuchi mkpuchi Silicone Keystone Ford Mondeo Ejiri mkpuchi Silicone Car Focus Akpa Silicone Key maka Ford Focus